ह्वात्तै घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति ? – News Dainik
News desk ९ मंसिर २०७७, मंगलवार ११:३० आर्थीक प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडौँ । मंगलबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मुल्य तोलामै १ हजार ८ सयले घटेर प्रतितोला ९२ हजार ५ सयमा कारोबार भइरहेको छ ।
यसअघि सोमबार छापावाला सुन तोलाको रु ९४ हजार ३ सयमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै मंगलबार तेजावी सुनको मुल्य प्रतितोला ९२ हजार कायम भएको छ । त्यसैगरी मंगलबार चाँदीको मुल्य पनि तोलामा रु ३० ले घटेर प्रतितोला ११ सय ८० रुपैँयामा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
अघिल्लॊ ६ वर्षीया बालिकाको हत्या आरोपमा पक्राउ परेका ‘साह’को घरमा आगजनी
पछिल्लॊ सरकारलाई किसानको हितभन्दा सत्ता नै प्यारो देखियो : डा. डिला संग्रौला